अर्जुन कपुर र मलाईका २०१९ मा विवाह बन्धनमा बाँधिने : रिपोर्ट
एजेन्सी, ११ कार्तिक । बलिउड अभिनेता अर्जुन कपुरले आफूभन्दा उमेरमा १२ वर्ष ठूली मलाइका अरोरासँगको सम्बन्धमा थप प्रगति गर्न चाहेको खबर आएको छ । यद्यपी यसबारे मलाइका र अर्जुन दुबैबाट कुनै प्रकारको बयान आएको छैन ।
फिल्मफेयरको रिपोर्ट अनुसार यी जोडी अर्को वर्ष २०१९ मा विवाह बन्धनमा बाधिँदैछन् । यसका साथै यी दुवैले आफ्नो सम्बन्धबारे पनि चाँडै नै आधिकारिकरुपमा खुलासा गर्ने बताइएको छ ।
यो खबरले अहिले बिटाउनमा निकै ठूलो खैलाबैला मच्चाएको छ । यस अघि यी दुबैलाई मिलान विमानस्थलमा हात पकडेर साथै हिँडेको देखिएको थियो ।
यसैबीच मलाइका करवाचौधको अवसरमा बेहुलीको लेहेंगामा देखा परेकी थिइन् । यस्तो पहिरनमा मलाइकाले वेडिंग जक्शन नामको एक शोमा रैंप वाक् गरेकी थिइन् । मलाइका यो शोमा प्रमुख आकर्षणको केन्द्रविन्दु बनेकी थिइन् । ओरेन्ज र ग्रे रंगको समायोजनमा मलाइका निकै सुन्दर देखिएकी थिइन् ।
भारतमा करवाचौधको पर्व चलिरहेको अवस्थामा धेरै अभिनेत्रीहरुले आफ्ना श्रीमान्का लागि वर्त राखेका छन् । अब अर्जुनसँग मलाइकाको विवाहको हल्ला चलिरहँदा यो वर्त मलाइकाले अर्जुनका लागि राख्छिन् या राख्दिनन् भन्ने थाहा पाउन उनका फ्यानहरु निकै आतुर छन् ।
मलाइका अर्जुनभन्दा १२ वर्ष जेठी छिन् र उनको पूर्व श्रीमान् अरबाज खानबाट १५ वर्षको एउटा छोरो पनि छ । यी दुईको सम्बन्धबाट कपुर परिवार खुशी छैनन् भने यसले सलमान खान र अर्जुन कपुरको सम्बन्धमा पनि दरार उत्पन्न गराएको छ । बलिउडमा आउन अघि अर्जुन कपुर सलमानकी बहिनी अर्पितालाई डेट गर्दै थिए ।
‘एन्टी हिरो’ मा अनमोलको जोडी बन्दै जसिता
अभिनेता अजय देवगनको फिल्म तान्हाजीले १८३ करोड कमायो
कस्तो छ अभिनेत्री शवाना आजमीको अवस्था ?
अन्डरवेयर किन्दा अरुलाई झैं मलाई पनि लाज लाग्छः शाहरुख खान
छप्पाक दर्शकमाझ छाएन, तान्हाजी १०० करोड क्लबमा प्रवेश
सफल अभिनेता आयुष्मान खुराना
अमिरको विशेष आग्रहमा ‘झुण्ड’मा फर्किएका थिए अमिताभ
फिल्म करन अर्जुनको रिमेक बनाउने तयारी
दिल्लीमा कैयौँ फिल्महरुको सुटिङ रद्द
सेल्फीका लागि चर्चित डाइमण्ड बेबाट खसेर मोडेलको ज्यान गयो
अजय देवगनको फिल्म तान्हाजीले दुई दिनमा ३६ करोड कमायो
यस्तो अवस्थामा भेटिए साहिद कपुर
जेएनयु घटनाबारे के भन्छन् अजय देवगन ?
अक्षय कुमारको फिल्म गुड न्युज दुई सय करोड क्लब नजिक
अजय देवगनको फिल्म ‘तन्हाजी’ले रिलिज पुर्व नै १३७ करोड कमायाे
हट बिकिनी अवतारमा अभिनेत्री दिशा पटानी
‘इक भिलेन २’ मा जोन र आदित्य